Izinqolobane ZaseDicamba - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
IBayer ixazulula icala le-US Roundup, dicamba kanye ne-PCB ngemali engaphezu kwama- $ 10 billion
Posted on June 24, 2020 by UCarey Gillam
Ekuhlanzweni okubizayo kwezinkinga zamacala eMonsanto, iBayer AG ithe ngoLwesithathu izokhokha imali engaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi ukuxazulula amashumi ezinkulungwane zezimangalo zaseMelika ezilethwe iMonsanto nge-Roundup herbicide, kanye namaRandi ayizigidi ezingama-10 ukuxazulula amacala ngaphezu kweMonsanto i-dicamba herbicide kanye ne- $ 400 million yezimangalo zokungcola kwe-PCB.
Izinqumo kuza eminyakeni emibili ngemuva kokuthi iBayer ithenge iMonsanto ngamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-63 futhi cishe ngokushesha yabona ukwehla kwamanani ezabelo ngenxa yesikweletu seRoundup.
IBayer imemezele ukuthi izokhokha imali eyizigidigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyisi-RNUMX ukuxazulula cishe amaphesenti angama-10.1 wezimangalo zabantu abalinganiselwa kwabangu-10.9 abasola ukutholakala kwababulali bokhula baseMonsanto bakaRoundup ababangele ukuba bahlakulele i-non-Hodgkin lymphoma. Lesi sivumelwano sibandakanya abamangali abagcine abameli ngenhloso yokufaka amacala kodwa amacala abo engakafakwa, kusho uBayer. Ngaphakathi kwenani eliphelele, ukukhokhwa kwe- $ 75 billion kuya ku- $ 125,000 billion kuzoxazulula amacala akhona manje kanti u- $ 8.8 billion ubekelwa eceleni ukuxhasa amacala angaba khona esikhathini esizayo, kusho inkampani.
Abamangali abafakiwe kulesi sivumelwano yilabo abasayinwe namafemu abelokhu behola i-Roundup federal multi-district litigation (MDL) kanti bahlanganisa iMiller Firm yaseVirginia, inkampani yaseBaum Hedlund Aristei & Goldman yaseLos Angeles kanye ne-Andrus Wagstaff firm waseDenver, eColorado.
"Ngemuva kweminyaka yamacala abalwa kanzima kanye nonyaka wokulamula okukhulu ngiyajabula ukubona amakhasimende ethu esezonxeshezelwa," kusho uMike Miller, wenkampani yabameli bakwaMiller.
Inkampani yakwaMiller kanye neBaum Hedlund basebenze ngokubambisana ukunqoba icala lokuqala lokuqulwa kwecala, lelo lika-Dewayne “Lee” Johnson wase-California. U-Andrus Wagstaff unqobe ukuqulwa kwecala lesibili kwathi iMiller Firm yalinqoba icala lesithathu lokuthi liqulwe. Sekukonke, lezi zilingo ezintathu zaholela ekutheni izinqumo zabasizi zifinyelele ngaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 2.3, yize abahluleli ecaleni ngalinye behlisa izinqumo.
Amajaji kuzo zonke lezi zivivinyo ezintathu athola ukuthi ama-herbicides kaMonsanto, njenge-Roundup, abangela i-non-Hodgkin lymphoma nokuthi iMonsanto yahlanganisa izingozi futhi yehluleka ukuxwayisa abasebenzisi.
Isigwebo ngasinye kulawa mathathu sesidlula kwinqubo yokudluliswa kwamacala manje kanti uBayer uthe abamangali kulawo macala abafakiwe esivumelwaneni.
UBayer uthe izimangalo zeRoundup zesikhathi esizayo zizoba yingxenye yesivumelwano sekilasi esivunyelwe yiJaji uVince Chhabria weNkantolo yesiFunda sase-US esiFundeni saseNyakatho saseCalifornia, owayalela inqubo yokulamula yonyaka wonke eyaholela ekuxazululeni.
Isivumelwano sizothatha noma yikuphi okutholakele esikhathini esizayo mayelana nezicelo zomdlavuza ezandleni zamajaji, kusho uBayer. Esikhundleni salokho, kuzoba nokwakhiwa kwe "Class Science Panel" ezimele. IClass Science Panel izonquma ukuthi ngabe i-Roundup ingadala i-non-Hodgkin lymphoma, futhi uma kunjalo, ngamazinga aphansi okuvezwa. Bobabili abamangali besenzo sekilasi neBayer bazoboshwa ukuzimisela kweClass Science Panel. Uma iClass Science Panel inquma ukuthi alukho uxhumano oluyimbangela phakathi kweRoundup ne-non-Hodgkin lymphoma lapho-ke amalungu ekilasi azovinjelwa ukuthi afune ngenye indlela kunoma yiliphi icala elizayo elibhekene neBayer.
UBayer uthe ukuzimisela kweClass Science Panel kulindeleke ukuthi kuthathe iminyaka eminingana futhi amalungu ekilasi ngeke avunyelwe ukuqhubeka nezimangalo zeRoundup ngaphambi kwalesi sinqumo. Futhi abakwazi ukufuna umonakalo wokujeziswa, kusho uBayer.
"Izivumelwano zeRoundup ™ zakhiwe njengesinqumo esakhayo nesifanelekile enkantolo eyingqayizivele," kusho uKenneth R. Feinberg, umlamuli oqokwe yinkantolo wezingxoxo zokuhlala.
Ngisho nalapho bememezela ukukhokhiswa, izikhulu zeBayer zaqhubeka nokuphika ukuthi i-glyphosate herbicides kaMonsanto ibangela umdlavuza.
"Iningi lesayensi likhomba ukuthi iRoundup ayiwudali umdlavuza, ngakho-ke, akuyena obhekene nezifo okusolakala ukuthi zibhekene naleli cala," kusho isikhulu seBayer uWerner Baumann esitatimendeni.
I-Bayer iphinde yamemezela isivumelwano se-mass tort sokuxazulula amacala e-US dicamba drift, okubandakanya izimangalo ezivela kubalimi ezisebenzisa ama-dicamba herbicides akhiqizwe yi-Monsanto ne-BASF ukuthi afuthwe ngezitshalo ezibekezelela i-dicamba ezakhiwe yi-Monsanto zidale ukulahleka nokulimala kwezitshalo okwandile.
Ekulingweni ekuqaleni kwalo nyaka, iMonsanto kwathiwa akhokhe $ 265 million kumlimi wamapentshisi waseMissouri ngomonakalo we-dicamba drift engadini yakhe yezithelo.
Bangaphezu kwekhulu abanye abalimi abafake izicelo ezifanayo zomthetho. IBayer ithe izokhokha imali efinyelela ezigidini ezingama- $ 100 ukuxazulula udaba lwamacala ezifundazwe ezehlukene ezisalindwe eNkantolo yesiFunda saseMelika esifundeni saseMpumalanga yeMissouri, nezicelo zeminyaka yokulima ka-400-2015. Abamangali kuzodingeka ukuthi banikeze ubufakazi bokulimala komkhiqizo wezitshalo nobufakazi bokuthi bekufanele kungenxa yedicamba ukuze iqoqwe. Le nkampani ilindele umnikelo ovela kummangalelwa kanye nayo, i-BASF, kule ndawo yokuhlala.
Lesi sivumelwano sizohlinzeka "ngezinsizakusebenza ezidingeka kakhulu kubalimi" abake balahlekelwa isivuno ngenxa yokukhukhula kwemithi yokubulala ukhula i-dicamba, kusho ummeli uJoseph Peiffer wenkampani yabameli bePeiffer Wolf, emele abalimi abanezimangalo ze-dicamba.
"Isivumelwano esimenyezelwe namuhla yisinyathelo esibalulekile sokwenza izinto zilunge kubalimi abafuna nje ukuthi bakwazi ukubeka ukudla etafuleni laseMelika nasemhlabeni," kusho uPeiffer.
Ekuqaleni kwalenyanga a inkantolo yenhlangano yanquma ukuthi i-Environmental Protection Agency yephule umthetho ngesikhathi ivuma ama-dicamba herbicides enziwe yiMonsanto, BASF kanye neCorteva Agriscience. Inkantolo ithole i-EPA ingazinaki izingozi zomonakalo we-dicamba.
Indawo Yokungcola Kwe-PCB
IBayer iphinde yamemezela uchungechunge lwezivumelwano ezixazulula amacala inkampani ethe zimelela kakhulu ukutholakala kwayo ezinkantolo ezibandakanya ukungcoliswa kwamanzi yi-PCB, okwenziwa yiMonsanto kwaze kwaba ngu-1977. Isivumelwano esisodwa sisungula isigaba esifaka bonke ohulumeni basekhaya abanezimvume ze-EPA ezibandakanya ukukhishwa kwamanzi okungakhubazekile Ama-PCB. IBayer ithe izokhokha isamba semali elinganiselwa ku- $ 650 million ekilasini, okuzodingeka ukuthi inkantolo ivume.
Ngaphezu kwalokho, iBayer ithe ingene ezivumelwaneni ezihlukene noMmeli-Jikelele waseNew Mexico, Washington, kanye ne-District of Columbia ukuxazulula izimangalo ze-PCB. Kulezi zivumelwano, ezihlukile ekilasini, iBayer izokhokha ngokuphelele cishe amaRandi ayizigidi eziyi-170.
UBayer uthe ukuphuma kwemali okungahle kube khona ngeke kweqe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5 ngonyaka wezi-2020 kanye namaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5 ngonyaka wezi-2021 ngemali esele esele izokhokhwa ngo-2022 noma kamuva.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Ukukhangisa ezolimo, BASF, Bayer, California, umdlavuza, izinkantolo, I-Dicamba, EPA, ukulima, Ukudla, Germany, glyphosate, icala, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, PCB, RoundUp, isayensi, I-Xtend
Icala likaDicamba elibhekene neBayer, iBASF lilungele ukuqhuma, kusho abameli
Posted on February 26, 2020 by UCarey Gillam
Izinkulungwane zabalimi abavela ezifundazweni eziningi kulindeleke ukuthi zijoyine amacala amaningi okulindelwa enkantolo yenhlangano ngenxa yezimangalo zokuthi imikhiqizo yokubulala ukhula eyenziwe nguMonsanto Co. nezinye izinkampani zamakhemikhali zibhubhisa futhi zingcolisa izitshalo, kufaka phakathi ukukhiqizwa kwezinto eziphilayo, iqembu labameli kanye kusho abalimi ngoLwesithathu.
Inani labalimi abafuna ukumelwa ngokomthetho ukuze bavule icala leMonsanto neBASF selikhuphukile esontweni eledlule nohhafu ngemuva komklomelo omkhulu wamaRandi ayizigidi ezingama- $ 265 Umlimi wamapentshisi waseMissouri osola ukuthi lezi zinkampani ezimbili yizo ezisola ngokulahleka kwempilo yakhe, ngokusho kukaJoseph Peiffer wenkampani yabameli iPeiffer Wolf Carr & Kane. UPeiffer uthe bangaphezu kuka-2,000 XNUMX abalimi okungenzeka babe ngabamangali.
Sekuvele kunabalimi abangaphezu kwekhulu abenza izimangalo ezinkampanini ezihlanganisiwe amacala amaningi eNkantolo Yesifunda sase-US eKapa Girardeau, eMissouri.
Ngasekuqaleni kwenyanga le bellwether trial ngoba lelo cala liphele ngejaji elilodwa ngazwilinye elinikeza iBader Farms ephethwe ngumndeni amaRandi ayizigidi eziyizigidi eziyi-15 kumonakalo wokukhokha kanye namaRandi ayizigidi ezingama-250 kumonakalo wokujezisa, ozokhokhwa yiBayer AG, inkampani yaseJalimane eyathenga iMonsanto e2018, kanye neBASF. Ijaji liphethe ngokuthi iMonsanto neBASF bakha uzungu ezenzweni ababazi ukuthi zizoholela ekulimaleni kwezitshalo okubanzi ngoba babelindele ukuthi kuzonyusa inzuzo yabo.
"Manje sesinemephu yomgwaqo yokuthola ubulungiswa bezisulu ze-dicamba. Isinqumo seBader eMissouri sithumele isiboniso esicacile sokuthi ngeke uzuze ngokulimaza abalimi abangenacala bese ubajezisa, ”kusho uPeiffer. "Ucwaningo lokulimala kwezitshalo nokwanda kwezikhalazo zabalimi lubikezela inkinga enkulu kakhulu kunalokho iMonsanto / Bayer neBASF abafuna ukukuvuma."
I-US Right to Know icele i-Environmental Protection Agency (i-EPA), evume ukuthi ama-dicamba herbicides naphezu kobufakazi besayensi bezingcuphe, ukuhlinzeka inani likazwelonke lenani eliphelele lezikhalazo ze-dicamba drift. Kepha ngenkathi i-EPA ithi iyithatha ngokungathi sína le mibiko, yenqabile ukunikeza isibalo futhi yathi kusezinhlakeni zombuso ukusingatha izikhalazo ezinjalo.
I-EPA iphinde ikhombise ukuthi ayiqinisekile ukuthi umonakalo obikwe ngabalimi, empeleni, kungenxa yedicamba.
"Izimbangela zezigameko ezehlukene zomonakalo azikacaci, ngoba kusamele kuphothulwe uphenyo oluqhubekayo," kusho okhulumela i-EPA. “Kodwa i-EPA ibuyekeza yonke imininingwane etholakalayo ngokucophelela.
"Ukushaya Isikhathi Ibhomu"
Njengoba nje uMonsanto noBayer bebhekane nokulahlwa kwemibhalo yangaphakathi ekulahlekelweni kwezilingo ezintathu ngenxa yezimangalo zokubulala ukhula ezenziwa yi-glyphosate ezenzelwe umdlavuza, kunemibhalo eminingi yezinkampani yangaphakathi etholakale enkantolo yamacala e-dicamba esize ukukholisa ijaji lecala lenkampani, ngokusho kukaBader Ummeli wamapulazi uBill Randles.
AbakwaRandles bathole amakhulu amarekhodi ezinkampani zangaphakathi zeMonsanto neBASF akhombisa ukuthi izinkampani bezazi ngobungozi bomkhiqizo wazo njengoba bezisho obala ukuthi ziphambene. Uthe omunye umqulu we-BASF ubhekise kwizikhalazo zokulimala kwe-dicamba "njengebhomu lesikhathi esibi" "ekugcineni eliqhume."
U-Bader nabanye abalimi basola ukuthi iMonsanto ibinobudedengu ekukhipheni ukotini nobhontshisi obenziwe ngezakhi zofuzo okungasinda ekufuthweni ngemithi yokubulala ukhula i-dicamba ngoba bekwaziwa ukuthi ukusebenzisa izitshalo namakhemikhali njengoba kwaklanyelwe kungaholela ekulimaleni.
IDicamba isetshenziswe ngabalimi kusukela ngeminyaka yama-1960s kodwa ngemikhawulo eyayibhekelela ubukhulu bamakhemikhali bokukhukhuleka buqhelele lapho wafafazwa khona. Lapho imikhiqizo ebulala ukhula yaseMonsanto efana ne-Roundup iqala ukuphelelwa amandla ngenxa yokumelana nokhula kabanzi, uMonsanto wanquma ukwethula uhlelo lokutshala i-dicamba olufana nohlelo lwalo oludumile lweRoundup Ready, olwalubhanqa imbewu ebekezelela i-glyphosate ne-glyphosate herbicides.
Abalimi abathenga imbewu entsha ebekezelela izakhi zofuzo ze-dicamba bangaphatha kalula ukhula olunenkani ngokufafaza amasimu wonke nge-dicamba, noma ngabe izinyanga zikhula ngokufudumele, ngaphandle kokulimaza izitshalo zabo, ngokusho kweMonsanto, umemezele ukusebenzisana kwe-dicamba ne-BASF ngo-2011. Lezi zinkampani zithe imishanguzo yabo emisha ye-dicamba izobe inciphe kakhulu futhi ingathambeki kangako kunezindlela ezindala ze-dicamba. Kodwa benqaba ukuvumela ukuhlolwa okuzimele kwesayensi.
I-EPA yakwamukela ukusetshenziswa kwe-Micanto dicamba herbicide “XtendiMax” ngo-2016. I-BASF yathuthukisa eyayo i-dicamba herbicide eyibiza nge-Engenia. Kokubili i-XtendiMax ne-Engenia zathengiswa okokuqala e-United States ngo-2017.
UDuPont naye wethule i-dicamba herbicide futhi angahle abhekane nezinsolo zabalimi eziningi, ngokusho kwabameli babamangali.
Ezimangalo zabo zomthetho, abalimi basola ukuthi bake babhekana nomonakalo kusukela ekukhukhulekeni kwezinguqulo ezindala ze-dicamba kanye nokukhuphula izinhlobo ezintsha futhi. Abalimi bathi izinkampani zinethemba lokuthi ukwesaba kokulimala komkhumbi kuzophoqa abalimi ukuthi bathenge imbewu ekhethekile ebekezelela i-GMO dicamba ukuze bavikele amasimu abo kakotini nawosoya.
Abalimi abatshala ezinye izinhlobo zezitshalo bebengenazo izindlela zokuvikela amasimu abo.
Umlimi waseNyakatho Carolina uMarty Harper, olima cishe amahektare angama-4,000 200,000 kagwayi kanjalo namantongomane, ukotini, ummbila, ubhontshisi, ukolweni namazambane, uthe umonakalo ohlobene nedicamba emasimini akhe kagwayi ungaphezu kwama- $ XNUMX. Uthe ingxenye yesivuno sakhe samakinati nayo isilimele.
Amapulazi angaphezu kuka-2,700 XNUMX anakho uthole ukulimala kwe-dicamba, ngokusho kukaprofesa wesayensi yezitshalo wase-University of Missouri uKevin Bradley.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, BASF, Bayer, izitshalo, I-Dicamba, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, zezempilo, Monsanto, izibulala-zinambuzane, isayensi